अध्ययन भन्छ : सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनु पनि हा’निकारक ! - Gandaki Chhadke
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अध्ययन भन्छ : सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनु पनि हा’निकारक !
विराटनगर, २० कात्तिक । विवाहित महिलाहरूले आफू विवाहित भएको पहिचान गराउनका लागि सिन्दूरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सिन्दूरलाई विवाहिता महिलाहरूको मुख्य श्रृंगारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यस्ता सिन्दूर स्वास्थ्यका हिसावले भने हा’निकारक हुने पाइएको छ ।एक अध्ययन अनुसार सिन्दूरमा लि’ड अर्थात् सीसाको अ’धिक प्रयोग हुने गरेको पत्ता लगाइएको छ । लि’ड मानव स्वा’स्थ्यका लागि हा’निकारक मानिन्छ । लि’डको स्तर र मात्राले स्वास्थ्य लागि हा’निकारक हुने एउटा बेलायती अध्ययनले पत्ता लगाएको छ ।
न्यू’जर्सीस्थित ‘र’च्गर स्कुल अफ प’व्लिक हे’ल्थ’ पि’स्काटावेका शो’धकर्ताहरूले गरेको न’मुना प’रीक्षणमा कूल १ सय १८ वटा सिन्दूरको नमुना प’रीक्षण गरिएको थियो । जसबाट सिन्दूरको रंगलाई गा’ढा बनाउनका लागि टे’ट्रोक्साइड नामक सिसाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । सं’कलित गरिएको सिन्दूरमध्ये ८० प्रतिशतमा न्यूतमम मात्रामा लि’डको प्रयोग भएको र अमेरिकन फूड तथा ड्र’ग ए’डमिनिस्ट्रेसनले तोकेको मा’पदण्डभन्दा अ’धिक मात्रामा सीसाको प्रयोग भएको पाइएको थियो ।सिँउदोमा प्रयोग गर्ने सिन्दूर हावाको माध्यमबाट फोक्सोमा तथा खानाको माध्यमबाट पेटमा पुग्न सक्ने हुँदा सी’साको सोझो अ’सर शरीरमा पर्ने हुन्छ र मानिसको मृ’त्युसमेत हुन सक्छ ।
रङ, धुलो आदिमा सीसाको प्रयोगले स्वास्थ्यलाई ख’राब गर्नुका साथै मा’नसिक स्थितिमा समेत ह्रा’स ल्याउने उक्त अध्ययनले बताएको छ ।सिन्दूरको प्रयोगले न’वजात शिशुहरू सबैभन्दा धेरै जो’खिममा पर्ने हुन्छ । आमाको सिन्दूरले ६ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका लागि स्वास्थ्यमा एकदमै प्र’तिकूल अ’सर पर्छ ।